Sida loo qodo macdanta 'Dogecoins' (Rakibaadda iyo isticmaalka) | Laga soo bilaabo Linux
IvanLinux | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
ka lacagta sanadka Waxay noqdeen moodo waayadan dambe, kuwa ugu caansan waa:
Laakiin waxaan diiradda saari doonaa mid gaar ahaan:
1.1 Maxay iigu egtahay meme ee
2 Macdanta Linux (Waxaa lagula taliyay in loo isticmaalo nidaamyada x64):
3 Macdanta on Android:
Maxay iigu egtahay meme ee
Sababta oo ah waxay ku saleysan tahay xusuusta Internet-ka caanka ah «DogeKaas oo ey ah Shiba inu. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato booqashada lacagta: Dogepedia Wikipedia
Macdanta Linux (Waxaa lagula taliyay in loo isticmaalo nidaamyada x64):
Aniga macdanta waa inaan ku dhejinno ku-tiirsanaanta soo socota:
Ubuntu ama noocyo kala duwan (Waxaa laga yaabaa inay ku shaqeyn doonto Debian):
Waxaan kala soo baxnaa xirmada SRC:
Kala fur .tar.gz:
Tag galka cpuminer-2.3.2:
Waa inaad badashaa «isticmaale» «shaqaale» iyo «erayga sirta ah, tan awgeed waxaan aadeynaa websaydhada soo socota oo aan iska diiwaan gelinaynaa: Bogga Diiwaangelinta
Marka la diiwaangeliyo, waa inaan sii wadnaa si aan u hubino koontadayada oo leh emaylka gaari doona koontadaada. Marka koontada la ansaxiyo, waxaan galnaa.
Waxaad isku arki doontaa Dashboardka, halkan waxaan ka geli doonnaa qaybta Shaqaalahayga, gudaha Shaqaalahayga waxaan ka abuuri doonnaa Shaqaale leh magaca iyo lambarka sirta ah ee aad rabto. Marka tan la dhammeeyo waxaan sii wadi doonnaa inaan ku xirno amarka soo socda:
Waxaan ku badalnaa "isticmaale" isticmaaleha aad ka diiwaan gashan jirtey nut2pools, "shaqaale" magaca Shaqaalaha aan horey u abuurnay iyo "furaha" oo aan ku badalayno erayga sirta ee Shaqaalaha MAYA isticmaalaha.
Diyaar! Durba waxaad qodaysaa macdanta, waad arki kartaa xaddiga Dogocoins laga soo saaray Dashboardka
Macdanta on Android:
Macdanta 'Android' waxaan ka soo dhejin karnaa barnaamijka soo socda Play Store:
Markii aan rakibno waxaan tagnaa websaydhada soo socota oo waxaan iska diiwaan gelin: Bogga Diiwaangelinta
Waxaad isku arki doontaa Dashboardka, halkan waxaan ku gali doonaa qaybta Shaqaalahayga, gudaha Shaqaalahayga waxaan ka abuuri doonnaa Shaqaale leh magaca iyo lambarka sirta ah ee aad rabto.
Marka tan la sameeyo, waxaan fureynaa DroidMiner.
Cinwaanka «Macdanta Pool URL» waxaan ku dhejinay:
"Username" waxaad ku qortay magacaaga isticmaale ee bogga aad horay uga diiwaangashanayd, muddo iyo magaca Shaqaalaha aad abuurtay, Tusaale: user.worker
Gudaha «Password» lambarka sirta ee Shaqaalaha MAYA isticmaalaha.
Gudaha «1», xulo tirada diirkja ee mobilkaagu haysto.
Xulo xulashada «LTC / DOGE / XPM» oo taabo «Start»
La dhammeeyay, waxaad qodaysaa macdan! waxaad arki kartaa xaddiga Dogocoins laga soo saaray Dashboardka
Waxa kale oo jira suurtagalnimada in laga qodo Dogecoins-ka MS Windows, laakiin maadaama balooggan uu yahay Software Bilaash ah, nidaamka ma dhigeyno. 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida loo sameeyo macdanta 'Dogecoins' (Rakibaadda iyo isticmaalka)
Xiiseynaya mowduucan Lacagaha Virtual. Maadaama aanan waxba ka aqoon dhaqaalaha, ma fahmin sida ay wax qiimo ah u yeelan karaan.Taas darteed uma baahnid wax kayd ah, ma waxaad ku dhahdaa dahab ama wax bir ah?
Waxaan waligay maqli jiray Bitcoins, laakiin waxaan arkaa inay jiraan waxyaabo kale oo badan oo lagu beddeli karo .. Waxaan u baahan doonaa inaan si qoto dheer u sii dhex galo arrintan si aan u arko sida ay tahay.
Waxaan kaloo u arkaa "macdanta" mid aad u xiiso badan. Miyaanay xad lahayn? Lacag ma samayn karaa si aan xad lahayn?
Aragti ahaan waxay leedahay xad. Muhiimadu waxay tahay in dhibic la gaadhay halkaasoo lacagta aan hadda ka dib lagu "abuuri karin" hawada khafiifka ah.
Maalmahan lacagaha oo dhan, ha ahaadeen ama ha ahaadeene, wax uun bay mudan yihiin maxaa yeelay waxaa jira dad rumeysan inay u qalanto wax, oo aqbala bixinta lacag gaar ah maxaa yeelay waxay rumeysan yihiin in qof kale aqbali doono lacagtaas si loogu siiyo wanaag ama adeeg. Qiyaas daahir ah, wow.
Halkan waxaa ah maqaal aad u wanaagsan oo sharraxaya waxa faa iidada ugu weyn ee lacagaha dhaqameed ka badan kuwa dalwaddii:
"Waxay uun u qalmaan wax uun maxaa yeelay waxaa jira dad rumeysan inay u qalanto wax, waxayna aqbalaan in lagu bixiyo lacag qaas ah maxaa yeelay waxay rumeysan yihiin in qof kale uu aqbali doono lacagtaas si loogu siiyo wanaag ama adeeg"
Baro! Sida saxda ah ula soco qadaadiicda dhabta ah ...
Midkoodna ma raaco heerka dahabka, ama mid kale. Kaydka ay ku saleysan yihiin (ilaha ay ka helaan "kalsoonida") waa lacago kale "sida la filayo" ka xoog badan ...
Ku jawaab drarko
«Maanta dhammaan lacagaha, suugaanta ama maya ...»
Waqtigan xaadirka ah lacagaha oo dhami waa kuwo farshaxan ah. (kumbuyuutar kumbuyuutar ah maahan xisaab)
Jawaab Hector Quispe
Macdanta ayaa la mid ah ka shaqeynta shilimaadka. Waxaad qayb ka mid ah awooddaada xisaabeed siineysaa shabakadda loo yaqaan 'cryptocurrency', si ay ganacsigeeda u qabsan karto, beddelkeedana waxay kugu siinayaan lacagtaas. Uguyaraan taasi waa waxa aan fahmay.
Nabadeey Elav, lacagtii hore waxay u qalantey biraha ay ka sameysnaayeen iyo ku xad gudubka birahaas waxay u horseedi kartaa musalafnimo gobolka oo dhan iyo rabshado badan. Intaas ka dib, lacagta qadaadiicda ah waxay bilaabeen inay ku salaysnaadaan heerka dahabka, taas oo macnaheedu yahay in lacag kasta "ay tahay mid u qalanta X peso oo dahab ah" laakiin tan iyo dhibaatadii saliida ee 1973 (markii aad ahayd cunug xD 😛) qadaadiicda uma baahna inay lahaadaan qiime oo aan waxba laga taageerin, dhammaantood waa mala-awaal iyo "kalsooni in waddanka soo saarayaa uu mushahar kaa siin doono." (Kani waa wax aad iyo aad u sarreeya oo kugula talin maayo inaad ka akhriso wikipedia maxaa yeelay mowduucan oo dhan wuxuu u qoran yahay sida dameerka).
Maaddaama dhaqaalaha oo dhan uu hadda ku saleysan yahay doolarka, Mareykanku wuu is maalgelin karaa isaga oo ku kacaya qiime-dhimista lacagtiisa si uu u bixiyo waxa lagu leeyahay. Waxa badanaa loo yaqaan "daabacaadda tikidhada." Si kastaba ha noqotee, maadaama lacagaha kale ee dhammaantood ku saleysan yihiin dollarka, waxaa lagu qasbay inay hoos u dhigaan si aysan suuqa ugu qaalisan. Si aan fikrad kuu siiyo, EU, Japan iyo Mareykanka waxay daabacayeen biilal sannado iyo sannado aan joogsi lahayn maxaa yeelay waxay isku dayayaan inay lacagta xasilloon tahay ... laakiin maalin uun tani way qarxi doontaa oo waxaad kaliya ka takhalusi doontaa Cuba oo aan lahayn dhaqaale sidan oo kale suuqa (waana kuu hubaal si hubaal ah).
Inbadan ama kayar.
Macdanta waa la qodan karaa waxa loogu talagalay in lagu sameeyo algorithm-ka lacagta, bilowga qaar badan ayaa lagu soo saaraa ilaha yar iyo ilaha dhaqaale ee aad iyo aad u badan, xadka ayaa si tartiib tartiib ah u sii kordhaya.
Ma jirto lacag haysata ogolaansho dhab ah laakiin waa mid khiyaali ah, waxaan ula jeedaa kalsoonida aad ku qabtid dalka soo saaray ama ururka. Dollarka muddo tobanaan sano ah ma sii raacayo heerka dahabka iyo inta kale sidoo kale.
Waxaan rajaynayaa in aanan khaladaad farsamo sameynin.
Ku jawaab Silzul
Ma ahan sida aad u sheegtay, lacagaha guud ahaan waxay ku saleysan yihiin is aaminka ay soo saarto dhaqaalaha dal, laakiin sidoo kale qiimahooda waxaa xukuma dowladda, tusaale cad ayaa ahaa markii Obama u sheegay madaxweynaha Shiinaha inuu baxo si loo qiimeeyo lacagaha si loogu xagliyo dhoofinta, ama isla wax ay Venezuela sameyso iyadoo hoos loo dhigayo lacagta. Tusaale kale oo cad ayaa ah in dhibaatada ka taagan aaga Euro, sicirka sarrifka Euro yen uu ku dhacay hoos u dhacyo taariikhi ah, wax walba waxay ku saleysan yihiin kalsoonida ay abuureen aagga ama waddanka, iyo taageerada dhaqaale.
Bitecoins-ku wuxuu si fudud ugu saleysan yahay inay isticmaaleyaashu rabaan iyo haddii kale, dulsaarka ay dul saaraan lama barbardhigi karo lacagta dhabta ah.
Kaliya laba shaki: 1) Kala-soocyada aan xallin doonno si aan u helno Dogecoins-kan ayaa loo adeegsadaa maxaa? 2) Ma jiraa interface garaaf ah oo loogu talagalay KDE?
Hadday shaqeeyaan, waxyaabo badan ... baadho 😀
oo waxaan la yaabanahay sababta aad u rabto interface garaaf ah?
Cajiib! Lacag Badan, Oo Taajir Ah
Waxaan in mudo ah ka qodayay Dogecoins, laakiin waxaan isticmaalaa cgminer halkii aan ka isticmaali lahaa cpuminer (anigoo ka faa'iideysanaya xaqiiqda ah inaan haysto AMD GPU: D) [qadaadiic badan, aad qani u ah, aad u badan crypto]. Haddii aad rabto, waan kuu sharxi karaa sida loo macneysto habkaas.
By the way, miyaadan ogeyn habka ugu fudud ee loo haysto jeebka 'Dogecoin' oo ku yaal Linux adigoon soo dejisan oo aan toos uga soo ururin Git? Waxaan jeclaan lahaa inuu jiro meel wax lagu keydiyo ... Ah sug, halkaa ka gudub, waxaan helay bakhaar XD ah https://launchpad.net/~cwayne18/+archive/doge
Waa wax madadaalo leh in lacag laga helo "meel aan jirin", laakiin marka la barbardhigo lacagaha dhaqameed maahan wax aad u qiimo badan ... Waxa kaliya ee qofku rajeyn karo ayaa ah in lacagta loo yaqaan 'cryptocurrency' ay qaddarin doonto ama ... sugto lacagaha dhaqameed si ay u qiimeeyaan Waxaan kaliya sugayaa maalinta aynaan mar dambe ku tiirsanaan nooc ka mid ah lacagta si aan u noolaano (ama in cryptocurrencies ay yihiin kuwa kaliya ee leh qiime kasta oo dhab ah).
Aragtidayda indha indheeye ahaan, dhammaan lacagaha maanta jira, wax kastoo ay yihiin, waxay ila muuqdaan inay waxbadan ka taageerayaan dhaqaalaha iyo waxsoosaarka dalka ama koox, sidaa darteed Mareykanka oo soo saara ama soo dejiya badeecado dantiisu aad u dheereyso ayaa aad loogu qiimeeyaa inuu yahay suuq taasi waxay dhalisaa faaiido
Qodob kale ama su'aal aniga igu soo kordhay, imisa dukaanno oo internetka ah ayaa iibka lagu hirgeliyay lacagta noocan ah? Xagee ka iibsan karaa tusaale ahaan Dogecoins?
Ma ahan dukaamada aad wax kaga iibsan karto dogecoin .. Furaha ayaa ah inaad ku badasho Dogegoin Bitcoin ka dibna waad ogtahay .. Ama waxaad ka iibsaneysaa dukaamada Bitcoins ama waxaad ugu wareejineysaa koontadaada bangiga: D.
Waad u rogi kartaa Dogecoin illaa Bitcoin halkan: https://bter.com
Waa midka aan u isticmaalo dhibaato la'aan
Halkan waxaa ku yaal hal shay oo maqan .. Ku rakib jeebka 'dogecoin' nidaamkaaga. Marka waxaan dhigayaa casharro ...:
sudo aptitude update && sudo aptitude-get rakib libssl-dev libdb-dev libdb ++ - dev libqrencode-dev qt4-qmake libqtgui4 libqt4-dev libboost1.48-dev libminiupnpc-dev libminiupnpc8 libboost-system1.48-dev libboost-system dev-libboost-program-options1.48-dev libboost-thread1.48-dev libboost-chrono1.48-dev dhisida git muhiim ah
tag clone https://github.com/dogecoin/dogecoin.git
Iyo voila 😀
zypper ku jira libopenssl-devel boost boost-devel git libdb-4_8 libdb-4_8-devel libqt4-devel
Kahor intaadan amrin sameynta waxaa lagama maarmaan ah in wax laga beddelo MAKEFILE. Qeybta INCPATH, ku dar dhamaadka xariiq tan: -I / usr / include / db4.8
Maxaa loogu talagalay faylalka shaqada?
By the way in Debian orod iyo "macdan" 🙂
Si aad lacagtaada ugu haysato kombuyutarkaaga oo aadan ugu jirin internetka martigelinaya 😀
Waad ogtahay in markaad fulineyso amarrada
tan ayaa soo ifbaxaysa:
-e muujinta # 1, astaamaha 1: amar aan la garanayn: " "
mid kasta oo ka mid ah amarrada.
ka dibna markaan fulinayo "sameynta" waxaan helaa tan:
*** Majiro bartilmaameed cayiman oo wax sameys ah lama helin. Sare
Jawaab Javier Yañez
Tan si gaar ah uma aqaano, laakiin ujeedku wuxuu yahay in Bitcoins si gaar ah horeyba ugu sii socday SLI ilaa 4 kaar hadii aanan si sax ah u aqrinin maxaa yeelay dhibaatooyinka xisaabeed wey isbadalayaan waana sii kordheysaa dhibaatada PC-ga inuu xaliyo ... fikradeyda suuban Kharashka qalabka lagu daray waqtiga hadda lagu kharash gareeyay howsha aad ugama badna qiimaha lacag kasta oo aad heli doontid.
Dhibaatadaas waxaa xaliyay PPC
Amarka ugu dambeeya waxaan ku helayaa tan:
"./Minerd: dooda aan xulashada ahayn ee la taageeray 'user.worker: password'
PS: Waxaan badalay "shaqaale" "password" iyo "user", laakiin sida iska cad anigu ma daabici karo. Maxaa dhacaya?
Hubso inaadan khaldamin?
$ ./minerd –url stratum + tcp: //dogeu.nut2pools.com: 5585 –userpass user.worker: lambarka sirta
Xusuusnow inay jiraan doodo –url iyo –userpass
bogga diiwaangelinta ma ku abuurtay shaqaalahaaga habka saxda ah? Waxaan sameeyay iyada oo aan wax dhibaato ah
Macdanta ... waad ku mahadsan tahay tabarucaadka.
wow qadaadiic badan
sida doge aad u faa'iido badan
marka crypto wow
In Arch Linux waxaad ka helaysaa xirmada AUR.
Tabobar aad u fiican hadda mar kasta oo aan doonayo inaan mar kale bilaabo macdanta waa inaan sameeyaa mid kasta oo ka mid ah tallaabooyinkan ama halkee ayaan ka bilaabi karaa.
oo maxaan ku iibsan karaa lacagtan loo yaqaan 'crypto currency'?
Waxaa loogu beddelay bitcoins, waxaad ku beddeli kartaa bitcoins doollar ama meelaha qaarkood waad u isticmaali kartaa.
Haddii aad rabto inaad mar labaad qodo macdanta waxaad gashaa galka, fulisaa shaashadda oo qor amarka dheer ee ay ku jiraan isticmaalahaaga, shaqaalahaaga iyo lambarkaaga sirta ah ee shaqaalaha.
Sideed u abuuri kartaa cinwaanka dadweynaha?
Ku jawaab Mou
Cinwaanka lacagta lagu shubo?
Iga raali noqo, laakiin isku xirka bogga isdiiwaangalinta ma shaqeynayo, qof ma ii soo gudbin karaa URL-ka FADLAN?
Jawaab Allan Herrera
WILLIAM E BANKIGA dijo
Waxaan aaminsanahay in macluumaadkan uu waqtigiisii ​​dhacay iyo / ama nut2pools «site» uu dhintay! Cusbooneysiin ayaa noqon doonta mid cabsi leh laakiin haddii nut2pools «goobta» aysan sii jiri doonin waxaan u maleynayaa in ujeedku yahay mid xamaasad leh!
Jawaab ku samee WILLIAM E BANKS
AjudaLinux! Nooca 0.2.0!